I-smartphone ka-Andy Rubin izophathwa yi-Android | Izindaba zamagajethi
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule kudalulwe isithombe salokho obekungaba yi-smartphone yokuqala ka-Andy Rubin, i-terminal ebikade izwakale kumahemuhemu kuphela futhi esikhombise ukuthi ingxenye engenhla yayo ayinamafreyimu kangakanani, kakhulu ngesitayela seXiaomi Mi MIX . Konke okuzungeze le phrojekthi kugcinwa kuyimfihlo, kepha kubonakala sengathi kancane kancane imininingwane ethile isiqalile ukuvuza. Okunye okugcinwe ngokuyimfihlo kunakho konke okuphathelene nohlelo lokusebenza oluzophatha le divayisi, uhlelo lokusebenza u-Eric Schmdt (i-Alphabet CEO) aqinisekise ngalo nge-tweet, kuzoba yi-Android.
U-Andy Rubin, ongumsunguli we-Google, ushiye inkampani eminyakeni embalwa edlule futhi bekungacaci ukuthi i-Android izoba uhlelo lwayo lokusebenza, kepha-ke uma ufuna ukuphumelela emakethe, ukubheja okuphephile yi-Android, ngoba iTizen noma ezinye izinhlelo zokusebenza azinaso isabelo semakethe. Okwamanje asazi ukuthi kulindeleke ukuthi ifike nini emakethe, kepha uma kubhekwa ukuthi le phrojekthi isinesikhathi eside isebenza, iphrojekthi ye-Essential akufanele ithathe isikhathi eside ukubona ukukhanya kwelanga.
Nathi asazi uma inguqulo ye-Android izoba msulwa noma izoba nesendlalelo sokwenza ngokwezifiso, okuthile okungenakwenzeka ukuthi iphrojekthi entsha ka-Andy Rubin ifuna ukungena emakethe ngonyawo lwesokudla. Asazi nokuthi intengo ingafinyelela kanjani emakethe, kepha uma ungafuni ukuthi into efanayo yenzeke kuwe njengeGoogle enamaphikseli, lokhu akufanele kube phezulu kakhulu. Ngaphezu kwalokho, uhlelo lokusabalalisa lungenye inkinga ezobhekana nayo le divayisi entsha, ngaphandle kokuthi umbono ka-Andy Rubin ukuthi aqale anikele ngale divayisi entsha e-United States, nokuyinto okungafanele isimangaze.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » I-smartphone ka-Andy Rubin izophathwa yi-Android
Sekuvele kunamahlebezi weSm Mini Galaxy S8